August | 2021 | HimiloNetwork
Maqaayadda Kalluunka lagu dhex daawado!
Himilo August 31, 2021	Leave a comment 235 Views
MUQDISHO (HN) — Kafateeri ku yaalla Fitnam lamid ma ahan kuwa badan oo sidiisa oo kale shaah iyo cunno fudud laga helo. Marka ay timaado maqaayadaha degaan la-jaalka oo dabeecadda qeyb ka muujiya, magaalada Ho CVhi Minh ee caasimadda labaad ee Fiitnam waa mid u gaar ah. Tanina ma ahan maqaayaddii koowaad ee xiriir dhow ka dhex abuurta dadka iyo ...
Maalinta Caalamiga ee Isirka Afrika.
Himilo August 31, 2021	Leave a comment 129 Views
MUQDISHO (HN) — Maalinta Caalamiga ah ee Isirka Dadka Afrika waxaa markii ugu horreysay loo dabaal-degayaa sannadkan si loo muujiyo kaalinta wax-ku-oolnimada leh oo ay kaga jiraan jaalliyadahooda ku nool dunida dacalladeeda meeshana looga saaro dhammaan nuucyada kala duwan ee isir-takoorka iyo faquuqa ka-dhanka-ah Afrikaanka. Dadka oo dhami waxaa lagu dhalay sinnaan iyo xurriyad ay sumcadda iyo qaddarintu u tahay ...
Xildhibaankii Xilkiisa uga haray Xanaanada Ilmaha
Himilo August 30, 2021	Leave a comment 96 Views
MUQDISHO (HN) — Waxay wadaagaan hoy qura iyo daryeel mida. Mana ahan kuwa wada dhashay. Balse hal nin sababtiisa ayay halkan u joogaan. Magaciisu waa Robert. Wuxuuna xubin barlamaan ka ahaa Kenya sannadkii 2017 wixii ka horreeyey. Isaga iyo ilmaha uu gabaad u fidiyay waxay wadaagaan waaya’aragnimo qura. Gebigood waa naafo iyo naafo-la-mood. Dad badan waxay barlamaanka u galaan inay ...
Maalinta Caalamiga ah ee Ka-dhanka-ah Tijaabada Nukliyeerka.
Himilo August 29, 2021	Leave a comment 152 Views
MUQDISHO (HN) — Taniyo markii la sameeyey tijaabadii ugu horreysay ee nukliyeerka oo ahayd 16 July 1945, in ka badan 2,000 oo mar ayaa la sameeyey, in yar oo muhiimad ah ayaa la siiyay bedqabka iyo samatabaxa nolosha ina aadan haddii la isku adeegsado. Si kastaba, taariikhda ayaa sheegeysa ciribxumida iyo burburka daran ee laga dhaxlo isku adeegsigiisa. Aqoonta insaanka ...
Ninka la jiifta Duurjoogta.
Himilo August 29, 2021	Leave a comment 250 Views
MUQDISHO (HN) — Ma ahan oo qura Yaxaaska saaxiibka kaliya oo uu rabaayad ama hayin ahaan u heysto. Duurjoog uu ka yimid yahay bah shabeelka la mataanka ah ee Haramcadka, diidiinka, iyo Daaxuurka ayaa kula nool gurigiisa. Dabcanna, intaas oo dhan waxaa uga sokeeya Masaska oo uu la jiifsado lana seexdo mararka qaar. Gudaha dalka Burundi ayuu ku nool yahay ...
La kulan: Jiiska Jeesteeya.
Himilo August 26, 2021	Leave a comment 238 Views
MUQDISHO (HN) — Majirto wax uu ka cawdo – micnaha waa qof aan isku arkin naafo. Emmanuel waa 19 jir lug iyo gacan is xiga ka go’an – balse sida qof kale oo caadi u aalamiitayn kara; haddii loo baahdana xarig boodka ku fiican. Intaas oo dhan wuxuu waliba ku qabsadaa farxad iyo niyadsamaan. Noloshu aalaaba markii uu yaraa way ...
Maalinta Caalamiga Xusuusashada Ganacsiga Addoonsiga iyo Ciribtirkiisa.
Himilo August 23, 2021	Leave a comment 268 Views
MUQDISHO (HN) — Habeenkii ay taariikhdu ku beegneyd 22-ka ilaa 23 Agoosto sanandkii 1791 gudaha Santo Domingo oo maanta la yiraahd Jamhuuriyadda Haiti waxaa ka marqaati kaceen bilowga kacdoon adag oo door weyn ka qaadanayay ciribtirka ganacsigii addoonsiga ee ka jiray Atlantic-ga. Waana isla taariikhdan midda ka dambeysa helidda iyo xuska maalinta caalamiga ah ee xusuusashada ganacsiga addoonsiga iyo dhammeyntiisa. ...
Maalinta Caalamiga ee Xusuusashada Dhibanayaasha loo waxyeelo Diintooda.
Himilo August 22, 2021	Leave a comment 113 Views
MUQDISHO (HN) — Xurriyadda diinta ama caqiidada, midda hadalka iyo aragtida iyo isu-imaatinka – mid diineed iyo siyaasi – intabada waa xuquuqaadku uu ina aadan maanta ku heshiiyay inuu si isla eg ugu raaxaysto. Laakiin, aalaaba ereyadu sida loo yiraahdo uma dhamaadaan ficil ahaan. Cahdigii Baaqa caalamiga ah ee Xuquuqda Aadanaha ayaa quruumuhu isla qaatay inay wadajir ugu istaagaan ilaalinta ...
Maalinta Caalamiga ee Bani-aadanimada.
Himilo August 21, 2021	Leave a comment 142 Views
MUQDISHO (HN) — Maalinta Caalamiga ah ee Bani-aadnimada oo lagu soo gaabiyo WHD waxaa la xusaa 19 Agoosto si loogu dabaal-dego wax-ku-oolnimada shaqaalaha safka hore uga jira gurmadka iyo gargaarka bani-aadnimo – oo iyaga oo u samafalaya bashariyadda u dhintay ama loo dhaawacay – waxaana halyeygaa birmadka ku jira lagu dhiirri-geliyaa inaysan marnaba ka joogsan halganka iyo bixinta dadaal nafhurnimo ...
Qoys muddo 6 sano ah Guri ka dhigta Musqul.
Himilo August 19, 2021	Leave a comment 118 Views
MUQDISHO (HN) — Saddex sano oo bani aadanka cimrigiisa kamid ah wuxuu ku bixiyaa booqashada suuliga ama musqusha; laakiin, lixdii sano ee lasoo dhaafay waxay hooyadan iyo labadeeda cunug guri ka dhigtaan musqul ama suuli. Guri aad u jeedaanna wuxuu ahaa walina yahay musqul korka iyo gidaaradda looga deyray dhoobo iyo laamiyeeri. Dhammaanteen waxaynu dhibsanaa daqiiqadaha kooban oo aan booqashada ...
Somaliland oo ka digtay in Haramacadka si sharci darro ah dibedda loogu dhoofiyo
Obama oo booqasho taariikhiga ku tagay Masjidka Baltimore ee Maraykanka.
Tajikistan oo laga mamnuucayo shacaa’irta iyo sunnada Islaamka
Ol’ole lagu baahinayo fahamka diinta Islaamka oo ka socda Kanada
Afroz Shah – Ninkii Xeeb laga sabray dib ugu soo celiyay Rajada Nolosha.